KEDU ESI ESI EWU EXCEL - EXCEL - 2019
Ịmepụta usoro omume na Microsoft Excel
Otu n'ime ihe dị mkpa nke nyocha ọ bụla bụ iji chọpụta isi ihe nke ihe omume. Inwe data ndị a, ị nwere ike ịkọ amụma maka mmepe ọganihu nke ọnọdụ. Nke a kacha pụta ìhè na ihe atụ nke akara ngosi na eserese. Ka anyị chọpụta otu esi arụ ya na Microsoft Excel.
Trendline na Excel
Ngwa Excel na-enye ikike ịmepụta usoro eji eme ihe site na iji eserese. N'otu oge ahụ, a na-esi na tebụl a kwadebere na mbụ maka nhazi ya.
Iji weta eserese, ịkwesịrị ịnweta tebụl dị ọcha, nke a ga-eji mee ya. Dị ka ọmụmaatụ, weghaara data na uru dollar dị na rubles maka oge ụfọdụ.
Anyị na-arụ tebụl, ebe otu kọlụm ga-enwe oge oge (n'ọnọdụ anyị, ụbọchị), na nke ọzọ - uru ahụ, a ga-egosipụta ike ya na eserese.
Họrọ okpokoro a. Gaa taabụ "Tinye". N'ebe ahụ na teepu na ngọngọ nke ngwaọrụ "Atụmatụ" pịa bọtịnụ ahụ "Nhazi oge". Site na ndepụta ndepụta, họrọ nhọrọ mbụ.
Mgbe nke a gasịrị, a ga-ewu usoro ahụ, ma ọ dị mkpa ka a zụlite ya. Mee aha nke eserese. Iji mee nke a, pịa ya. Na mpaghara nke na-egosi "Na-arụ ọrụ na chaatị" gaa na taabụ "Nhazi". Na ya anyị pịa bọtịnụ ahụ. "Aha Chart". Na ndepụta nke mepee, họrọ ihe ahụ "N'elu chaatị".
N'ọhịa nke na-egosi n'elu eserese, tinye aha anyị chere na ọ dị mma.
Mgbe ahụ anyị na-abanye aka na axes. Na otu taabụ "Nhazi" pịa bọtịnụ na rịbọn "Aha aha". Anyị na-agafe isi ihe "Aha nke isi ihe nkwụsị" ma "Mbụ n'okpuru isi".
N'ọhịa nke na-egosi, tinye aha nke ọkpụkpọ ahụ, dị ka ọnọdụ nke data dị na ya.
Iji mee ka aha nke oghere vertical anyị na-ejikwa taabụ "Nhazi". Pịa bọtịnụ "Aha aha". Sequentially ịnyagharịa site na menu popup. "Aha nke isi ogwe aka" ma "Ntụgharị aha". Ụdị nhazi nke aha aha ahụ ga-adaba adaba maka ụdị ihe osise anyị.
Na mpaghara nke aha a na-ahụ anya na-egosi, tinye aha a chọrọ.
Ihe omumu: Esi mee ka eserese na Excel
Ịmepụta usoro nhazi
Ugbu a, ịchọrọ ịgbakwunye ụda na-emekarị.
Ịbụ na taabụ "Nhazi" pịa bọtịnụ ahụ "Ụdị nhazi"nke dị na ngwaike ngwaọrụ "Nyocha". Site na ndepụta nke meghere, họrọ ihe "Ọdịdị dị mma" ma ọ bụ "Njikọ ọnụ ọgụgụ".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-agbakwunye eriri edemede ahụ na chaatị. Site na ndabara, ọ bụ oji.
Nhazi usoro n'usoro
Enwere ike inwe usoro ntọala ọzọ.
Gaa gaa na taabụ "Nhazi" na ihe menu "Nyocha", "Ụdị nhazi" ma "Di elu Nhọrọ Ahịa Nhọrọ ...".
Mgbanwe window ahụ meghere, ị nwere ike ime ntọala dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịgbanwe ụdị mwepụ na njedebe site na ịhọrọ otu n'ime isi isii:
Iji chọpụta ihe ndabere nke ihe nlereanya anyị, dozie akọrọ n'akụkụ ihe ahụ "Tinye na chaatị ahụ uru nke izi ezi nke njedebe". Iji hụ nsonaazụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Mechie".
Ọ bụrụ na egosi a bụ 1, mgbe ahụ, ihe nlereanya a bụ ịdabere na o kwere omume. N'ihe dị anya karịa na unit ahụ, enweghị obi ike.
Ọ bụrụ na ịjughị afọ ojuju, ị nwere ike ịlaghachi na paradaịs ma gbanwee ụdị smoothing na nso. Mgbe ahụ, mepụta ọnụọgụ ọzọ.
Ọrụ bụ isi nke usoro ntanetị bụ ikike nke ịkọ amụma maka ihe ndị ọzọ.
Ọzọ, gaa na mpaghara. Na igbe ntọala "Ọhụụ" na mpaghara kwesịrị ekwesị, anyị na-egosi oge ole na ole n'ihu ma ọ bụ azụ ọ ga-adị anyị mkpa ịnọgide na-emekarị usoro ịkọ. Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Mechie".
Ọzọ, gaa na oge. Ọ na-egosi na akara ahụ bụ elongated. Ugbu a, enwere ike iji ya iji chọpụta ihe ngosi na-egosi maka ụbọchị ụfọdụ mgbe ị na-enwe ọganihu dị ugbu a.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na Excel, ọ bụghị ihe siri ike ịmepụta usoro nhazi. Ihe omume ahụ na-enye ngwaọrụ ka o wee nwee ike ịhazi ya iji gosipụta ndị na-egosi ya n'ụzọ zuru oke dị ka o kwere mee. Dabere n'usoro oge, ị nwere ike ịme amụma maka otu oge.